Icala kunye nabaThengi bakho | Martech Zone
Icala kunye nabaThengi bakho
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 18, 2009 NgoLwesibini, Meyi 6, 2014 Travis Smith
Abaqhubi beSwitchboard abaDala
Kumnxeba osandula ukwenziwa kwinkampani enkulu yomnxeba, endingazukuyikhankanya (ilogo yabo ijongeka njengenkwenkwezi yokufa eluhlaza okwesibhakabhaka),
Ngaba ndandithandekile ngummeli wam wenkonzo yam? eyothusayo, ndiyazi.
Kuwo wonke umnxeba wadwelisa kule nto ndiyifunayo, kwaye wathi izinto ezinje, “esi sisivumelwano uninzi lwazo abathengi bam njenge ", kwaye" mandithethe nomphathi ukuze ndifumane us isivumelwano esingcono ”, kwaye“ Ndiyaluqonda unxunguphalo lwakho, andazi ukuba kutheni bona yenza lonto ”. Isenokungabonakali ekuqaleni, kodwa wayethetha ngokungathi ukwelam icala. Ndaziva ngathi ndinomntu (wo) ngaphakathi, imole, umhlobo ongene nzulu kwisebe lenkonzo yabathengi elinde nje umnxeba wam ukugqibezela umphathi wethu.
Ngokulula, wayenam us.
Rhoqo unxibelelwano lwethu nabameli beenkonzo zabathengi luyachasa kwaye luzaliswe ziziphumo ezibi. Lo mmeli wentengiso ubonakala eyikhathalele ngokwenene imeko yam. Wayefuna ukutyikitya ngempumelelo into ethile, kwaye andenze ndizive ndonwabile ngayo. Le yayingeyiyo intengiselwano encinci nokuba. Ndisuka kwinkonzo yam yesathelayithi ndisiya kwi-TV yedijithali ephambili. Wayeluncedo kakhulu ekuchazeni ukhetho lwam kunye nokumamela endimxelela kona. Akuzange kube kanye ngexesha lokufowuna ndisoyika ukuba angamameli into endiyifunayo okanye angayihloniphi into endiza kuyithetha.
Isifundo sokuqala apha kukuba inkonzo yabathengi imalunga nokumamela abathengi bakho, kunye nokuzama ukubonelela (ngokuhlangeneyo) isisombululo esifanelekileyo kwingxaki. Lo mmeli usombulule ingxaki yam ngobabalo, ubukrelekrele, nangaphantsi kwesiqingatha seyure! Ukuba kuphela ngabameli beenkonzo zabathengi bebenjengale, ngekhe nditshintshe kwiDish Network (yhoo!) Ndaya kwi-AT & T (iihiphu ezimbini !?).
Esona sifundo sikhulu kukuba amava am-am umsebenzisi amava-nalo mmeli weenkonzo zabathengi uphucule umbono wam wenkampani. Nangona ndingenalo unxibelelwano nemveliso yokwenyani, amava am omsebenzisi sele elungile. Khumbula, ayinamsebenzi nokuba ilunge kangakanani imveliso yakho- ukuba amava okufikelela kuloo mveliso ayilunganga, abantu abayi kufuna nokuzama.
tags: Inkonzo eyenzelweummeli weenkonzo zabathengi
Ukujonga indawo ekuyo indawo yakho ngoPhendlo olwenzelwe wena
UOscar Del Santo
Ngomhla wama-21 ku-Disemba 2009 ngo-9: 41 AM
Ukuhlala kunye nabathengi bethu kunyanzelekile, ngakumbi kuthi sonke ababandakanyekayo kwimidiya yoluntu.